Ndị a bụ akụkọ niile nke gam akporo Wear 2.0 | Gam akporosis
Anyị nwere ihe LG smartwatches abụọ ahụ, Watch Sport na Watch Stlye, na Android Wear 2.0 dị ka ụdị buru ibu na nke ga - enye nku elekere abụọ ahụ na-ebute ndị ọzọ nke na-anatabeghị mmelite ahụ. Ọ bụ ezie na elekere ọhụrụ ndị ọzọ na Wear 2.0 na-abata, ndị nke ndị na-emepụta Korea ga-abụ ihe abụọ na-atọ ụtọ ịnweta, n'agbanyeghị na ha nwere ihe dị iche na nke ha.
Ekpughere gam akporo Wear 2.0 ya mere na anyị ga-atụle atụmatụ kachasị mma nke isi nsụgharị nke gam akporo os kachasị maka wearables. Wear 2.0 nke ị ga-enwe ike izute enyi gị, mara ihu igwe n'ehihie, ma ọ bụ nkeji ole ị kọọrọ, site na ịdị mfe na ọsọ nke ilegide nkwojiaka aka gị. A awa ole na ole gara aga Google kwupụtara gam akporo Wear 2.0, yabụ ka anyị rute na ya.
2 Iche ihu ndị ọzọ ahaziri iche
3 Ahụ ike dị ka nnukwu uru
4 Standalone ngwa
5 Wayszọ ndị ọzọ iji zaghachi ozi
6 Google Assistant na nkwojiaka nke aka gị
Gam akporo Wear 2.0 chọrọ inye ozi ndị ọzọ banyere ihu nche, na-enye ọzụzụ ka mma, ụzọ ọhụrụ iji ngwa, ụzọ ọhụrụ ka ị ga-esi na-enwe ọfụma ma nwee Google Assistant dị ka otu n'ime isi axes iji wepụta ụdị ihu niile; ọ bụ ezie na nke a na-abịa ntakịrị belata na ọrụ ma e jiri ya tụnyere Homelọ Google.
Iche ihu ndị ọzọ ahaziri iche
Ugbu a, i nwere ike hazie gị gam akporo Wear si nche ihu na ozi na omume si ọkacha mmasị gị ngwa. Ọ dịghị ihe ọzọ iwere ngwa ngwa na nkwojiaka gi ka ichoputa ihe omume na-esote, arụmọrụ nke akpa ahụ, ọganihu na ebumnuche ahụike, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị gị mkpa.
Igwe ngwa ngwa na ihu nche ahụ na-enye gị ohere ịzigharị Uber n'otu ntabi anya, malite oru mgbatị ma ọ bụ kpọtụrụ enyi gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị. Iji ikike ịme ngosipụta na ihuenyo ahụ, ịnwere ike ịgbanwe ozi dị iche iche ọ na-enye gị.
Ahụ ike dị ka nnukwu uru
Google Fit bụ ngwa arụnyere na ọtụtụ elekere gam akporo Wear, ma ugbu a na-enye gị ohere dekọọ ijeụkwụ gị, ebe dị anya, calorie ọkụ na ndepụta obi mkpụrụ obi na-adabere na ma ị na-eje ije, na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè. I nwekwara ike ịlele ihe ntinye dị ka ụdị ọrụ ahụ niile anyị nwere ike ịme n'otu oghere.
Ọ bụrụ na i nweela wearable na data mkpanaka, ị nwere ike ijide oku, ozi, egwu egwu na Google Play Music ma jiri ngwa ndị ọzọ kachasị amasị gị.
Nke a bụ otu n'ime nnukwu akwụkwọ akụkọ gam akporo Wear 2.0, ọ bụkwa na ị nwere ike họrọ ngwa ị chọrọ ịnwe na elekere gị ma budata ha ozugbo na Playlọ Ahịa Google. Ọ bụrụ na elekere gị nwere njikọ data LTE, ịnwere ike ịkpọ oku ma jiri ngwa ahụ ọbụlagodi na ejikọtaghị ya na ekwentị gị. N'ụzọ dị otú a ọ na-aghọ onwe ya.
I nwere otu ezigbo ngwa nke ngwa dị ka Android Pay, AccuWeather, Bring!, Foursquare, Google Fit, Google Messenger, Google Play Music, Lifesum, Robinhood, Runkeeper, Runtastic, Strava, Telegram, Uber na ndị ọzọ.
Wayszọ ndị ọzọ iji zaghachi ozi
Google choro ime ka odi nfe iguta ma zaghachi ozi site na igwe elekere gi. Mgbe enwetara mmadụ, ịnwere ike ịgbasa ọkwa wee pịa ya jiri nkwupụta, ịde ihe, ma ọ bụ ide ede zaghachi freehand; ị nwedịrị ike iji emoji kwa.
Have nwere Facebook ozi, Glide, Google Messenger, Hangouts, Telegram ma ọ bụ WhatsApp ka ị gbalịa, ma e wezụga ịnwe Smart Reply, nke n'otu ntabi anya na smartly na-atụ aro nzaghachi dị iche iche dabere na ozi ị natara.
Google Assistant na nkwojiaka nke aka gị
Gam akporo Wear 2.0 na-eweta Google Assistant na nkwojiaka nke aka gị, ka i wee nwee ike ịchọta azịza na ọrụ emere site na ihe akpọrọ "aka anaghị akwụ ụgwọ". Nwere ike ịjụ Google Assistant banyere ihu igwe ma ọ bụ ka eme ụfọdụ ọrụ. Site na gịnị bụ ndoputa na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma ọ bụ na-aga ozugbo na-arụ ọrụ na ọnọdụ igodo. I nwedịrị ike imelite ndepụta ịzụ ahịa gị site na iwu olu dị mfe.
Dị ka mgbe niile, ị ga-eji iwu "OK Google" site na ịpị bọtịnụ ike ogologo. N'oge ahụ, Google Assistantant dị na Bekee na German. Ga-abụ maka asụsụ ndị ọzọ n’ọnwa ndị na-eso ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ ihe kachasị mkpa gbasara gam akporo Wear 2.0